> Resource> Windows> Windows 7 SSD Optimization: Olee na-ebuli Windows 7 maka SSD
Ọ bụrụ na ị na-agba Windows 7 na ha SSD dị ka a buut mbanye, i kwesịrị ịma ndị a Windows 7 njikarịcha Tweaks na-esi gị na kọmputa ike.
Gbanyụọ ino na mkpu
Gbanyụọ defrag na SSD
Gbanyụọ usoro weghachi
Gbanyụọ windows pụrụ ịdabere ileba anya
Adịghị gbanyụọ indexing
Windows 7 na-eme ụfọdụ na-akpaghị aka, dị ka gbanyụọ superfetch, prefetch, bootfetch, na gbanyụọ defrag na SSD. Ọfọn, n'agbanyeghị ihe ụdị ma ọ bụ usoro na diski ike ị na-eji, a ga-redundancy chịkọbara na kọmputa, na mkpa ka ị ọcha ha na etiti oge, iji hụ na a oké PC arụmọrụ.
Mgbe ị na-ọ na-agba ngwa ngwa na mmemme amalite ikwu nwayọọ nwayọọ ma ọ bụ ọbụna adịghị eme, ị na-azọrọ na ịrụ a SSD Windows 7 njikarịcha. Ị nwere ike ikpochapụ junk faịlụ, ndekọ njehie, nzuzo Ama, ndekọ redundancy, wdg otu otu, na ị na-nwere ike họrọ iji nweta ha niile okụrede na otu oge na a usoro ihicha ngwá ọrụ Wondershare 1-Click PC Care, nke nwere ike idozi niile aga-eme n'elu na otu oge na otu click, na-azọpụta ọtụtụ oge gị na-eme ha otu otu na nzọụkwụ site nzọụkwụ.
Ị na mkpa iji wụnye na-agba ọsọ a PC elekọta ngwá ọrụ. Ọ nwere ike na ekpochapụ gị na kọmputa na-akpaghị aka tufuo na-abaghị uru faịlụ na-emerụ njehie, na n'ịwa a scanning akụkọ n'ihi na ị na-elele ọnọdụ gị na kọmputa.
Mgbe ahụ ịrụ a pịa na "Idozi Ugbu a" button. Ọ DỊ MMA. Na ị na kachasị gị Windows 7 maka SSD, na ị ga-ọ na-agba ndị ọzọ were were.
Ihe bụ ihe ọzọ, nke a 1-Click PC Care awade nchebe maka kọmputa gị nche iji hụ na ị na-arụ n'okpuru a kpam kpam mma gburugburu ebe obibi.
Ejikwa Samsung Kies maka PC Zuru!
Olee otú Naghachi formatted Photos si Windows 8